Post-structural | လမ်းအိုလေး
Category Archives: Post-structural
(ရိုက်ခဲ့တဲ့ သံတစ်ချောင်းကို ဆွဲနှုတ်နေရတယ် တစ်ယောက်တည်း – သည်မော်နိုင်။ နိုဝင်ဘာ – ၂၀၁၂။ နှစ်ကာလများ။)
Categories: Kabyarz, Post-structural | Tags: ရိုက်ခဲ့တဲ့ သံတစ်ချောင်းကို, သည်မော်နိုင်, Kabyarz, post-structural, The Maw Naing | Permalink.
သည်မော်နိုင် ၀့ ၈ ပလတ်စတစ်၊ အခရိုက်လစ်၊ ရာဘာပျော့ ၄ပေ၊ ၃ပေ၊ ၃ပေ ၂၀၀၄ (သည်မော်နိုင်)
သည်မော်နိုင် ၀့ ၈
ပလတ်စတစ်၊ အခရိုက်လစ်၊ ရာဘာပျော့
၄ပေ၊ ၃ပေ၊ ၃ပေ
ကဲ့သို့သော အရာများ (သည်မော်နိုင်)
ဟိုနား ဒီနားမှာ တွေ့ရတဲ့ အပျောက်များ (သည်မော်နိုင်)
F.A.Q. (အချိန်တိုလေးအတွင်း မေးမြန်းလာသော အမေးများ) (သည်မော်နိုင်)
ဘယ်လို ကင်မရာအမျိုးအစား သုံးရမှာလဲ၊ အခုအများစု သုံးနေတဲ့ DV ကင်မရာတွေဆို
အမေးအက္ခရာတွေ ? ဘာဖြစ်လို့ မသယ်ဆောင်နေတာလဲ။
O ပြီးတော့ n နောက်တစ်ချက်fဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ သည် ပေါ်လာရတာလဲ။
မြန်မာ အမေးစကားလုံးတွေ အပြီးမှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ question mark
ပျင်းစရာကောင်းသူတွေနဲ့ နေထိုင်နေရခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
သည်မော်နိုင်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကျောက်ခဲတုံးလား။ ရေခွက်ငယ်လား။ လိင်တံအစွပ်လား။
အဆုံးသတ်မှုတွေထဲ ရောက်နေပြီဆိုတာကို၊ ဘာဖြစ်လို့ အကြောက်အကန်
ငြင်းဆန်နေရတာလဲ။ Continue reading →
အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး အကြောင်းရေ ၁၀၀ (၁၉၇၁ – ၂၀၀၃) (သည်မော်နိုင်)
၁ ၊ တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက် ခဲတံဟာ တုံးသွားတယ်
၂ ၊ လျှောက်ဝင်လာတာပဲ ထင်ကို မထင်ခဲ့
၃ ၊ သူ မကြည့်ချင်တဲ့ ဂြိုဟ်တုလိုင်းက သုညဒသမသုည၊
၄ ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြော၊ ရေဒီယိုဟာဒ်ကို မုန်းတယ်တဲ့ ဂီတကို ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ ကောင်တွေမို့လို့
ဘယ်လိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာလဲ ဆိုတော့ နီဗားနားတွေ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သလို၊ ဘော့ဒိုင်လန်က ဂီတကို
၅ ၊ သည်မော်နိုင် ၁၉၇၁ – ၂၀၃၀
၆ ၊ သမ်းဝေနေသော နှင့် ပါးစပ်လေးပေါက်
၇ ၊ … … … ဒါပေမဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာတွေက ကစဥ့်ကလျားဖြစ်နေတဲ့ အနာဂတ်
၈ ၊ … … … သောက်နှစ်ဆတိုးမြင့် … … …
၉ ၊ လက်သည်းခွံက အနက်ရောင်တွေ၊ လက်ခလယ်က ထောင်ထောင်မတ်လို့
၁၀ ၊ မျဉ်းကြောင်းအမည်းတွေ၊ အမည်းတွေကြားက၊ ထပ်မံကန့်သတ်ထားတဲ့ မျဉ်းကြောင်းတွေ … … … Continue reading →
တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ပစ္စည်း (သည်မော်နိုင်)
ပိုက်ဆံအိတ် အတွင်းပိုင်း၊ – – – – – – နဲ့ – – – – – ၄ခု၊ မကြာမီကာလ၊ ငရုတ်သီး ပါရုံပါသော တို့ဟူးနွေးနှစ်ခွက်၊ ဘက်ထရီ ထပ်မံသွင်းရမည့် တစ်သုံးလုံး၊ စကားလုံးများသာ ရှိနေသော ရသစာတမ်း ရေးလက်စ စာမျက်နှာ၊ အမြဲ ပြောဆိုနေရခြင်း၊ အနက်ရောင်ဖျော့၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ တစ်ဦးတည်းပိုင် dot com အဝေးမှ အမေရဲ့ တယ်လီဖုန်းသံ၊ ပြီး အလွမ်းရှည်ရှည်၊ အသားမျှင်ပေါ် ထပ်ရောက်လာတဲ့ သုံးယောက်ပြိုင် နှုတ်ခမ်းသားများ၊ စွဲမက်ဖွယ်၊ အဓိပ္ပာယ်အကျယ် ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ အများသူငါ၊ ၂၄ နာရီစာ Continue reading →
by lanolay	1 Comment
ပြီးသွားပြီ။ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတာနဲ့ (သည်မော်နိုင်)
… … ဖန်ပုလင်းထဲက ယင်ကောင်တွေလိုပါပဲ
နှစ်တစ်ထောင် ကြာအောင် စောင့်ခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်ဟာ သေသွားပြီ၊
၁၉၃၄ – ၁၉၄၅
သက်တမ်းတော့ ဆက်လက် တိုးထားပါတယ် … …တဲ့
ကိုယ်ပေါ်က အမည်းရောင်တစ်ခုကို ချွတ်ချတယ်
စစ်မှာ ဆွေမျိုး မရှိဘူး၊
လက်ချောင်းတွေက နှစ်ဆုပ်နဲ့ တစ်အုပ် အသာအယာ ညှစ်နေမိတယ်၊
လက်ခလယ်က ဒီအတိုင်း မြက်တောတွေကို ဖယ်ရှားပြီး
ရိုက်ခဲ့တဲ့ သံတစ်ချောင်းကို ဆွဲနှုတ်နေရတယ် တစ်ယောက်တည်း … … … ရှိရင်ပေးပါ အဟ အဟ အဟ ဟာ (သည်မော်နိုင်)
ရိုက်ခဲ့တဲ့ သံတစ်ချောင်းကို ဆွဲနှုတ်နေရတယ်
တစ်ယောက်တည်း … … … …
ရှိ ရင် ပေး ပါ အဟ အဟ အဟ ဟာ
IDEA၊ မေလ၊ ၂၀၀၆။
စိတ်တော့ ကြိုက်သလောက် ဆင်းရဲခံနိုင်၏
ကိုယ်ခန္ဓာ အဆင်းရဲတော့ မခံနိုင်၊
စကားလုံးလေး လေးငါးလုံးကြောင့်၊ သည်မော်နိုင် ထိုင်နေတဲ့ ထိုင်ခုံကနေ
ဖယ်ပေးရမှာ ကြောက်နေ အ ဟ အ ဟ အ ဟ အ ဟ ဟာ ဟား
အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ပိုင်းကြောင့်
သည်မော်နိုင် အတည်လေး ရွေ့သွားမှာ စိုးနေ၏
အ ဟ အ ဟ အ ဟ ဟ ဟာ ဟား
၁၂ ပေါင်း များစွာအတွက်၊ အတွက်
မြို့ကြီးပေါ်မှာ လေယာဉ်ပျံများနှင့်အတူ စစ်သည် ရောက်လာ၏
Mirrored: ကောင်းကင် (နိုင်ငံပြုအနုပညာမဂ္ဂဇင်း)
Categories: Concretes, Kabyarz, Post-structural | Tags: ရိုက်ခဲ့တဲ့ သံတစ်ချောင်းကို, သည်မော်နိုင်, Concrete, Kabyarz, post-structural, The Maw Naing, Visual | Permalink.
လေယာဉ်ပျံ၊ ဒါမှမဟုတ် ကဗျာရွတ်ပြနေသလို သူ့ဘာသာစကားပြောပုံ (မြင့်သန်း)
ငါ့ဆီလာ၍ ပြန်ထွက်သွားသော အချစ်ဝတ္ထု (ဇော်ဇော်အောင်)